MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA SCHIPPERKE IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Schipperke iyo Sawiro
Ruck nadiifinta AKC Schipperke
Schipperke wuu yar yahay mararka qaarna waxaa lagu sifeeyaa inuu yahay dawaco oo kale. Jidhku waa laba jibbaaran in profile. Marka dhakada laga arko dhinaca waxay u egtahay wax yar oo wareegsan, oo u cidhiidhinaya afkiisa. Afka waxoogaa wuu ka gaaban yahay dhererka dhakada. Sanka yar waa madow. Ilkaha waxay ku kulmaan maqas ama qaniinyo heer ah. Indhaha yaryar, ee oval-ka ah waxay horay u wajahayaan madaxa. Dhegaha kacsan waa qaab-dhismeed sare oo saddex-geesood ah. Laabta ayaa ballaadhan, oo gaadhaysa xusullada. Khadka sare waa heer ama u yara janjeera xagga dambe eeyga. Mararka qaar waxay ku dhashaa bilaa dabo, laakiin haddii ay dabada ku dhasho waxaa si caadiya loogu xiraa salka ilaa meesha aysan ka muuqan. Fiiro gaar ah: dabo istaaggu waa sharci darro inta badan Yurub. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta (Dewclaws). Jaakad laba jibbaaran ayaa ka gaaban wejiga, dhegaha, foodda hore ee foodda iyo hocks. Koodhku waa dherer dhexdhexaad ah oo jidhka ah oo xitaa ka sii dheer qoorta, garbaha iyo garabka. Midabka koofiyaddu wuxuu badanaa ku yimaadaa midab adag, oo ah midabka kaliya ee AKC aqbalo, laakiin sidoo kale wuxuu ku yimaadaa taanyo iyo fawsyo kaladuwan oo ay aqbali karaan naadiyada kale.
Schipperke waa eey yar oo dhaqso badan oo firfircoon. Waa mid kacsan, feejigan oo isku kalsoon. Aad u daacad ah oo daacad ah, gaar ahaan carruurta. Xaqiiqdii waxay kuxirantahay sayidkeeda. Bisadaha xayawaanka ah si farxad leh ayaa loo aqbali doonaa waana caadi ahaan eyda kale. Schipperke waa mid aad u caqli badan, xiiso leh oo qalad xun. Eeyadan ayaa si aan caadi aheyn ugu shaqeeya doomaha. Astaamaha ugu wanaagsan ee Schipperke waxaa ka mid ah awooda ay ku difaaci karto gurigeeda kuwa ku soo xadgudbay - ka noqoshada qofna, iyo saaxiib aad u fiican carruurta. Qaarkood way ku adkaan karaan jabka guriga . Si wanaagsan ula dhaqan bulshada si looga hortago inay ka digtoonaadaan oo ay ka fogaadaan shisheeyaha. Way fududahay in la tababaro maaddaama ay caqli badan tahay oo ay xiisaynayso barashada Marar badan eeyaha yaryar sida Schipperke waxay horumariyaan waxa loo yaqaan Cudurka Dog yar , heerar kala duwan dabeecadaha bini'aadanka ee kiciya , halka eygu aamminsan yahay inuu joogo hogaamiyaha xirmada aadanaha. Marka eey loo oggol yahay guriga xukuma , waxay horumarin kartaa dhibaatooyinka dhaqanka, sida, laakiin aan ku xaddidnayn, ilaalin , ciyey waswaas, kala-go'id walaac , ciil, boob iyo xitaa qaniinyo. Goobaha loo yaqaan 'Schipperkes' ee loo oggolaaday inay la wareegaan ayaa la sheegay inay noqdeen kuwo kulul, si ula kac ah u ilaaliya. Haddii qof cusub soo booqdo, waxay qaadan doonaan xaalad feejignaan ah waxayna isku dayayaan inay difaacaan dhulkooda, ha ahaato guri dabaq ah ama dhul yar, labada lugood iyo afar lugoodba. kuwa ku soo xadgudbay . Waxay noqon karaan baarayaal waswaas badan markay iskudayaan oo ay KUU sheegaan waxa la sameeyo ama la isku dayo oo LOOGU sheego kuwa kale inay ka baxaan AAGA. Schipperkes waxay jecel yihiin inay ciyaan. Ka dib jilifkii hore si ay kuu digtoonaadaan, waxay u baahan yihiin in loo sheego in ku filan ay ku filan yihiin oo ay iska aamusaan. Schipperkes la siinayo sharciyo la raaco, waxay xaddidayaan waxa ay yihiin iyo kuwa aan loo oggoleyn inay sameeyaan, oo ay weheliso hoggaamiye xirmo adag oo adag, iyo maalinle ah xirmo socod , ma horumarin doono dabeecadahaas xun. Eyda horey u soo saaray waxay si fiican u beddeli doonaan isla marka la kulmo dareenkooda canine.
Dhererka: 10 - 13 inji (21 - 33 cm)
Miisaanka: 12 - 18 rodol (5.5 - 8 kg)
Hypothyroid, suuxdin, sinta dysplasia iyo sinta sinta oo u janjeera. Legg Calves Perthes, Progressive Retinal Atrophy (PRA), cataracts, iyo cudur dhawaan la helay oo loo yaqaan MPS 111B (Mucopolysaccharidosis). Waxaa jira tijaabo hidde ah oo loo heli karo MPS 111B iyada oo loo marayo Univ. ee Pennsylvania. Ka taxaddar inaadan ka badin noocyadan.
Schipperkes waa eeyo u fiican nolosha guriga. Waxay ku firfircoon yihiin gudaha. Eeyahaani waa kuwa si dhakhso leh u dhaqso badan waana fikrad fiican in la helo daarad deyr leh.
min pin isku darka pug chihuahua
Schipperke waa nooc firfircoon oo aan daal lahayn. Si ay u noqdaan kuwo faraxsan oo maskax ahaan deggan, waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta, dheer soco ama orod. Waxay sidoo kale ku raaxaystaan ​​ciyaar iyo fursad ay ku ordaan. Noocani waa mid aad u firfircoon gudaha wuxuuna heli doonaa layli badan oo ku dhex wareegaya gurigaaga. Waxay si weyn ugu raaxeysan doontaa inay si bilaash ah uga baxdo hoggaankeeda barxad ammaan ah oo la deyriyay ama jardiino.
Qiyaastii 3 ilaa 7 eyyo
Schipperke waa mid aad u nadiif ah qurux badana ka taxadaraysa is-qurxinteeda, laakiin in lagu ilaaliyo dhererka dhererka dhererka dhexe ee dusha sare leh, ku shanlee oo si joogto ah ugu caday burush adag. Shaambo qallalan markii loo baahdo. Waxay daadiyaan wax aad u yar ilaa jaakada 'ay afuufayso,' taas oo noqon karta inta badan 3 jeer sanadkii dumarka ka yar kan ragga iyo tan dhaddig, gaar ahaan markay da 'yihiin. Isbeddelka jaakadani waa dhibic lama filaan ah oo DHAMMAAN jaakad gudaheeda muddo 10 maalmood gudahood ah. Hal milkiile ayaa leh 'Waxaan la soo baxay ilaa laba kiish oo dukaameysi ah oo ay ka buuxaan jilicsanaan, timo hoos ah oo ka mid ah 12-rodol Schip! Waxaan u arkaa inay fududahay oo dhakhso badan tahay inaan iyaga siiyo qubeys kulul marka loo barbardhigo xoog ku muquuninta jaakadda laba ama saddex jeer toddobaadkan (marwalba banaanka!) Si looga takhaluso dhammaan dabacsanaanta, timaha cuncunka leh ka hor inta eeyga uusan uga bixin guriga oo dhan. Qurxiye ayaa tan u samayn kara qofka iyada oo aan lahayn qalajiyaha xoog. Waxay macno ahaan qaawan yihiin oo foosha xunyihiin qiyaastii 2-3 bilood, waxay kuxirantahay waqtiga sanadka iyo inta waqtiga ay kubixinayaan banaanka, timaha inay kusoo laabtaan jaakad cusub oo damac leh.
Markabka 'Schipperke' waxaa ku soo caano maalay Flanders kabtan doonta kanaal la yiraahdo Renssens. Waxay ka soo farcantay 40-rodol (18 kg) oo ido ido madow ah, oo loo yaqaan 'Leauvenaar', oo ah isla xayntii adhiga lagu ilaalin jiray ee madowga Sheepdog Belgian ah ka soo degay. Schipperke waxaa loo koriyey mid yar iyo mid yar ugu dambeyntiina wuxuu noqday nooc kala duwan gebi ahaanba. Eeyadu waxay noqdeen xulasho aad loo jecelyahay in lagu ilaaliyo doonyaha maraakiibta ee Belgium. Noocani waxaa loo adeegsan jiray dhaqashada xoolaha, ugaadhsiga ugaarsiga ama si fudud u ilaalinaysa degelkiisa. Flemish erayga 'schip' macnaheedu waa doon, sidaa darteed meesha ay ka heleen magacooda 'Schipperke.' Waxay kasbadeen naanaysta 'Kabtanka Yar' iyo 'Skipper-yari' maxaa yeelay eeyadu waxay ahaayeen 'jiir', hawl aad muhiim u ah kanaalka markabka, iyo waliba badiyaa eeyga kabtanka. Noocani wuxuu caan ku noqday qoysaska reer Beljim dhammaadkii 1800. Waxay marki ugu horaysay kasoo muuqatay show eyga 1880. Laga soo bilaabo waqtigaas wixii ka dambeeyay waxaa loo dhoofiyay aduunka oo dhan. Schipperkes waxay sifiican ugu shaqeeyaan doomaha oo dadku badanaa waxay helaan noocani inuu kula yimaado doonyaha iyo safarada kaluumeysiga. Waxay sameysaa eey weyn oo waardiye ah marka ay doontu barroosinka dhigato habeenki, iyadoo laga digayo wax kasta oo aan caadi ahayn isla markaana eygu si fiican ugu raaxeysto safarkiisa. Schipperke waxaa aqoonsaday xisbiga AKC sanadkii 1904.
SCiPS = Naadiga Schipperke ee Puget Sound
'Kani waa Hooska, Schipperke oo jira 3 sano, waana eeyga ugu fiican ee aan abid leeyahay. Qoyskeygu waxay ku hoydaan hudheel ku yaal Koonfurta Dakota (Black Hills) inta lagu jiro xagaaga, sannad walbana Shade ayaa nala socda. Wuu yaqaan xuduudaha oo maalin walba wuxuu ku wareegaa meertada meesha, isagoo ciyey markasta oo baabuur soo gasho, isla marka ay ka soo baxaanna wuu salaamayaa wuxuuna u kaxeynayaa albaabka xafiiska. Aad iyo aad buu ufiican yahay saaxiibtinimo wuxuuna la ciyaaraa caruurta oo dhan inkasta oo uusan waligood la kulmin, una dulqaataya dhamaan maaraynta nin ee ay wataan dabada ruxaysa. Markii aan gubno waxaan ku idhaahdaa 'Hooska, gabay noo gabyi' marka uu tilmaamo taas ayuu kuu jeclaan doonaa, taas oo ka dhigaysa qof walba qosol. Isagu waa qorraxdayda, weligayna ma arag wiil caqli iyo madadaalo badan!
Weel ka mid ah Ey-yarta Schipperke — Centaur: the Pony & Schipperke Collector
Calua oo jira 7 bilood
Tori iyo walaalkeed Buddy oo jira 3 bilood
Tori the Schipperke oo ku raaxeysaneysa waxa ugu wanaagsan ee ay sameyso, raacida doonta aabbe!
Eeg tusaalooyin badan oo Schipperke ah
Sawirada Schipperke 1
Sawirada Schipperke 2
tilmaanta xadka collie mix puppy
shaybaarka madow iyo terrier mix
shaqaalahaordshire terrier shar pei mix
waa maxay eeyaha beauceron
mini walrus eey buuxa oo koray